ubukhulu Izinqolobane - Mytika Speak
Ikhaya / Ubukhulu
Maka - ubukhulu
Awuhambi phakathi kobukhulu, sezivele zakhiwe futhi zingaphakathi kuwe. Ukhetha nje ukuthi iyiphi ozokuzwa. Imizwa yakho iyala ...
Ngokuthola okhiye, abantu banekhono lokubona imiqondo ehlukile futhi bahlangabezana nobukhulu obuhlukile. Lapho i-True Self ivezwa kokuhlukile ...
Ubukhulu obuhlukile bukunikeza ngezinketho ezingapheli zempilo yokuphila. Wake wambheka umuntu futhi wakunaka okuthile ngaye? Mhlawumbe bekungokwabo ...
Okhiye yizinsimbi ezisetshenziselwa ukuvula izindlela ezikunikeza amandla okufaka ezinye izilinganiso. Indlela ingabonakala njengephaseji elide elinokuhlukahluka okuningi ...
Umhlaba ungasebenza njengeZulu lawo wonke umuntu. Umhlaba unezilinganiso ezingapheli lapho zonke izifiso zinganikezwa. Ngokuya ngenjabulo yomuntu ...
Ubukhulu bomzimba yizikhathi zokuphila ezenzeka ngasikhathi sinye ezindaweni ezahlukene zesikhathi nendawo. Kukhona inani elingenamkhawulo lobukhulu ...